Muraayadaha indhaha oo ku habboon qaabka wajigaaga | Ragga Stylish
Lucas garcia | | Dhameystirka, nololeedka
ka gafas de sol noqon doonaa dhammaystir lagama maarmaan u ah looks hada kadib. Dabcan, sida aan u soo iibsanno qaar ka mid ah dharka ama kuwa kale iyadoo ku xiran hadba sida ay noogu habboon yihiin, muraayadaha indhaha waa inaan isla sidaas yeelnaa. Waa dilaa marka ay dadku xirtaan muraayadaha indhaha oo aan wejigooda gabi ahaanba dhigin.
Haddii aad u maleyneysay inaad mid doorato gafas de sol Way fududahay umana baahnid inaad xisaabta ku darsato, marka laga reebo xaqiiqda ah… "Waan jeclahay qaabkan, waxaan rabaa midabkan", aad baad u qaldantay Ku qaabka wajiga, timahaaga iyo xitaa midabka timahaaga, Saameyn ku yeesho in muraayadaha qaar adiga kaaga habboon kuwa kale.
Sidaas darteed in sanadkan qofna uusan ku qaldamin gafas de sol maxaa la dooranayaa, aan aragno waxa ay yihiin ugu habboon iyadoo loo eegayo qaabka wajiga.
1 Wejiga laba jibaaran
2 Wajiga Wajiga
3 Wajiga Oval
4 Dheeman qaabaysan
Wejiga laba jibaaran
Wejiyada laba jibbaaran waxay leeyihiin xarig adag oo calaamadeysan iyo dhabanno ballaadhan. Iyada oo leh astaamo adag oo adag, waa inaad ka heshaa dheelitir muraayadaha yaryar oo leh qayb hoose oo wareegsan oo muraayadda ah, sida dariiqa wadadaiyo qaabka aviator.
Hadaad leedahay wejiga wareega, Saamaynta ay tahay inaad ku gaarto muraayadaha indhaha waa qeexitaanka ugu sarreeya ee suuragalka ah. Ku muraayadaha muraayadaha Waxay noqon doonaan xulafadaada ugu fiican si dhabannadaadu ugu muuqdaan kuwo khafiifa. Had iyo jeer iska ilaali qaababka wareegsan.
ka wajiyada oval iyagu waa kuwa ugu mahadnaqa marka ay timaaddo doorashada muraayadaha indhaha. Waxaad dooran kartaa nooc kasta oo muraayad ah, maxaa yeelay dhammaantood waxay ku habboon yihiin wejigaaga. Dabcan, iska ilaali muraayadaha indhaha oo aad u hooseeya oo dhaadheer.
Wejiga u ekaanta dheemanka? Haa, waa wejiyo leh wax yar oo ballaadhan, dhabanno ballaadhan iyo garka aad loo qeexay oo khafiifsan. Haddii aad leedahay dheeman qaabkiisu u eg yahay, las gafas dariiqa wadada waa xulafadaada ugu fiican.
Miyaad horeba u ogtahay kuwa muraayadaha indhahaaga ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dhameystirka » Muraayadaha indhaha oo ku habboon qaabka wajigaaga
iyo persol ???
Zara Isaga Udgoonkiisa ragga